Waxaad la kulmi kartaa mid ama ka badan oo ka mid ah dhibaatooyinkan. Markaas magaabay AVI ah ka dhigi kartaa noloshaada fudud.
Dhererka files AVI yihiin in ka badan 15 daqiiqo (ka badan xadka ugu badan).
Video AVI ayaa files aad u badan tahay in size. Waxaad u baahan tahay iyaga googooyaa u soo dirto ama la wadaagto dadka kale.
Qeybta 1: Best AVI magaabay
Qeybta 2: 100% Free AVI magaabay
Qeybta 1: Hel AVI Best u magaabay
Interface dareen si ay u dhinto files AVI.
30 jeer ka dhakhsi la multi-Processor.
No luma tayada video.
Ikhtiyaar dib-u-riixo oo dhan qaab caanka ah ama aan dib-u-encode.
Taageerada jarida AVI, MP4, wmv, MPEG, FLV, iyo qaabab loo jecel yahay oo dhan.
All-in-mid video software: AVI magaabay, AVI joiner, Converter AVI.
3 Tallaabooyinka yaree AVI Files
1. AVI Load files
Ka dib markii ay ku rakiban Video Converter Ultimate, waxaa la furo iyo waxaad arki doontaa daaqadaha aasaasiga ah sida hoos ku qoran. Guji "Add Files" button iyo wada hadal u furan furi doonaa, halkaas oo aad ka dooran kartaa files AVI iyo soo dejinta barnaamijka si googooyaa.
Talooyin: By "DVD Load" button, waxa kale oo aad u bedeli karaan filimada DVD ama kala galay qaybaha yar oo ciyaaro iyo in lala wadaago dadka kale.
2. Iska yaree AVI in qeybaha
Si aad u gooyay files AVI keeno, xaq guji item ku jira liiska oo ka menu popup ah, dooro "Edit" doorasho> "jar". Magaabay AVI wuxuu bilaabi doonaa. Sidaa daraadeed, waxay idinku jebiyeen karo files AVI galay qaybaha aan xad lahayn. In sidaa la yeelo, qaybaha set hore la "Calan dhibic bilowday" iyo "dhamaadka Calan dhibic" sliders. Marka gabal ah ayaa qarka u saaran, riix batoonka maqas u badbaadin in saxaarad hoose. Marka aad ku dhameysatay, guji "OK" inay u dhoofiyaan dhan clips oo diyaar u yahay inuu badbaadin clips ee AVI qaab ama nooc kasta oo joogto ah, oo ay ku jiraan MP4, wmv, MOV, FLV, MPEG, MP3, M4V, iwm
3. Ku bilow jarida files AVI
Hadda doortaan qaab si loo badbaadiyo clips AVI cut in computer. Halkan waxaad kala socon kartaa qaabka AVI asalka ah, ama ay doortaan qaab kale video. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari videos on qalab mobile, dooratid qalabka ka mid ah liiska. Just guji image qaab dhinaca midig u dhigay qaab wax soo saarka. Markaas, waxaad tagtaa folder cayimay adigoo gujinaya "Output Open" in la badalo magaca haddii loo baahdo. Ugu dambeyntii guji "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan jarida files AVI.
Qeybta 2: Free AVI magaabay
Waxaa gebi ahaanba waa 100% magaabay AVI lacag la'aan ah. Waxaad u isticmaali kartaa si loo saaro qaybo ka mid ah aan la rabin video AVI ka dibna aad u hesho qaybaha aad jeceshahay. Si kastaba ha ahaatee, magaabay AVI free yeelan karaan 30X habka shaqada ugu dhaqsiyaha badan 10 jeer oo kaliya. Waxa aanu taageeraan burnning video inay DVD halka Video Converter Ultimate ka gubtay video inay DVD badan oo arrimo menu caan ah.
2. AVI magaabay
Sida magacaba ka muuqata, AVI magaabay loo sameeyay si gaar ah u hawl hal, si ay u dhinto AVI gudbiyo sida fudud oo dhaqso badan ee suurtogalka ah. Waxay bixisaa qalabka aasaasiga ah ee looga baahan yahay shaqada. User ayaa si fudud u baahan tahay in ay doortaan qaybaha video ay rabaan inay soo gooyay, iyo software ka dhoofisa video finalka. Hagaajin kale ee aasaasiga ah waxaa ka mid ah qabsado ee subtitles iyo xawaaraha video ah.
Kani waa barnaamij kale oo inta badan uu leeyahay hawsha hal maanka: in aan kala tagno iyo gooyay files AVI. Quick AVI Splitter saamaxaya kuwa isticmaala in ay qaataan oo gogo 'oo ah video AVI ballaaran oo iyaga jari yar video clips, iyo sidoo kale sahlaysa in ay doortaan qeybo ka mid ah file AVI kaas oo noqon kara wax soo saarka galay file video cusub ah. Heerka jir ah, size jir iyo goobaha cod ah oo dhan laga beddeli karaa ka hor inta dhoofinta AVI ah video final.
Tani waa codsi kale oo cad oo fudud loogu sameeyo itusi deg deg ah ee files AVI. Iyada oo kaliya video hal iyo track audio, ma jiraan wax adag in ay bartaan in Personal AVI tifaftirka. Laga soo tago in ay awoodaan in ay la gooyaa oo kala videos AVI, users sidoo kale ka dhigi kartaa qaar ka mid ah itusi saamayn digital fudud sida engegay iyo isku dhafka la ruxruxo.
5. Kate ayaa Video Qalabka
Tani waa codsi dhamaystiran u video tafatirka, laakiin sidoo kale dabooli kara hawl fudud ee ka shaqaynaya sidii magaabay AVI ah aad. Marka aad kala qaybsan tahay, jaray ama laga gooyay file AVI in aad ka jeelahay, software ayaa sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku qaataan heerka yara, muuqa, riixo iyo hagaajin kale, ay ka mid yihiin kala guurka la abuurayo.
Iyada oo diirada la saarayo jarida files AVI iyo MKV, software this kale oo ku jira hawlaha kale video tafatirka. Waa codsiga lacag la'aan ah, oo waxay culays ku sameecadda AVI tafatirka. Taas macnaheedu waa in tayada file asalka aan la dhimay oo dhan marka aad ka gooyay video ah - tani waxay noqon kartaa arrin barnaamijyo kale oo laga yaabaa inay keento in wax soo saarka ah oo tayo leh loo hoose. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, tani ma aha kiiska la AVI Trimmer. Tani piece of software waa fiican ee jarida files AVI si ay u la gelin karaa si Youtube, iyo sidoo kale in ay ka saarto durdur wax audio file ka AVI ah; wax tifaftirayaasha tartamaya waxaa laga yaabaa in aanay awoodin in ay sidaa sameeyaan si fudud.
NCH ​​Software si fiican u yaqaan for samaynta codsiyada aad u fiican, oo VideoPad Video Editor ayaa loogu talagalay in ay isticmaalaan qof, iyadoo aan loo eegin heerka waayo-aragnimo ama awoodda farsamo. Sida dhowr ah oo ka mid ah ciwaanada kale ee qodobkan, VideoPad Video Editor waa ka badan magaabay AVI ah, in kasta oo hawshan si fudud la daryeelo gudahood codsiga. Waxa kale oo aad ku dari kartaa kala guurka iyo saamaynta in videos, xaalkaa qaabab kale file, Suite isticmaalaan qalabka tafatirka audio, iyo files dhoofiyo qaabab kala duwan iyo noocyada warbaahinta.
Barnaamij kale oo tafatir oo dhamaystiran waa in laga Flash-Integro oo ah qaab VSDC Free Video Editor. Tani codsiga video tafatirka aan toosan kuu ogolaanaysaa inaad qaataan hawlo badan oo tafatir kala duwan, oo ay ku jiraan mid ka mid fudud jarida files AVI. Arrintan oo uu weheliyo AVI, dhammaan kale qaabab video waxaa taageera software this sidoo.
Top 50 Songs New Video Download
> Resource > Video > Isticmaal Quick AVI magaabay in yaree AVI Files aan Loss Quality